Ny Adobe Lightroom Mobile dia lasa afaka amin'ny Android | Famoronana an-tserasera
Adobe Lightroom Mobile dia kinova kely amin'ny programa ho an'ny PC sy Mac ny sasany amin'ireo endri-javatra manan-danja indrindra amin'izay ny mpampiasa rehetra dia afaka mankafy azy ireo amin'ny finday avo lenta, na amin'ny iray amin'ny Android na eo ambanin'ny iOS.
Amin'ny Android, ity rindrambaiko ity dia nisy nandritra ny volana vitsivitsy, saingy famandrihana Creative Cloud no nilaina hahafahanao miditra ao aminy ary eo am-pelatananao ny iray amin'ireo rindrambaiko tsara indrindra izay hita izao avy amin'ny fampiharana Android sy fivarotana lalao video hanovana sary. Andro vitsivitsy izao dia afaka miditra amin'ny Lightroom Mobile maimaim-poana ianao nefa tsy mila kaonty Creative Cloud.
Ao amin'ny kinova 1.4 no anampiana azy tolotra maimaim-poana ho an'ny mpampiasa Android. Midika izany fa na iza na iza dia afaka manararaotra ny fandaminana, ny fanovana sary ary ny fahaiza-mizara izay atolotry ity kinova finday ity.
Amin'ny fametrahana an'ity app ity dia azonao atao miditra amin'ny toerana voafantina ahafahanao mifehy bebe kokoa ny loko sy ny lokon'ny sarinao. Amin'izao fotoana izao dia iray amin'ireo fitaovana matanjaka indrindra misy ao amin'ny Google Play Store izy io, izay mametraka toerana mihoatra ny sasany toa an'i Pixlr. Mety tsy dia misy fampisehoana kely akory, saingy azo antoka fa hihatsara io lafiny io.
Na dia maimaim-poana aza dia afaka manao izany ireo mpampiasa manana famandrihana Creative Cloud midira raha hiditra amin'ny sync amin'ny fisie amin'ny alàlan'ny sehatra samihafa, noho izany dia azo ampitaina amin'ny kinova finday misy sary izay amboarinay, hitondrana izany any amin'ny PC na Mac tsy mandany fotoana amin'ny fizotrany, ny fotoana ilana azy fotsiny mba hamoahana ilay sary novaina.
Fotoana mahaliana iray araraoty tsara mankany amin'ny fanovana sary avy amin'ny fitaovana Android. Azonao atao ny misintona azy avy amin'ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Adobe Lightroom Mobile misy maimaim-poana amin'ny Android